Madaxweyne Farmaajo Oo Amar Ku bixiyey in Amniga Laga Shaqeeyo – XAMAR POST
Madaxweyne Farmaajo Oo Amar Ku bixiyey in Amniga Laga Shaqeeyo
By Mohamed Abdi On Apr 13, 2021
Munaasibadda bisha barakaysan ee Ramadaan awgeed, waxaan hambalyo qiimo badan u dirayaa dadkeenna Soomaaliyeed iyo dhammaan muslimiinta adduunka oo idil.
Madaxweyne Farmaajo oo ka hadlayey Fadliga Bishaan Ayaa Yiri “Si aan uga faa’iideysanno Bishaan barakaysan waa in aan ugu horreyn isu-qalbi xaarnaano oo aan iscafino, qofkastana uu walaalkiis kale la jeclaadaa wanaag iyo horumar.
Bisha Ramadaan ee sanadkan waxa ay inoo timid iyada oo wali uu dalkeennu la daalaa dhacayo saameynta caafimaad iyo dhaqaale ee cudurka safmarka ah ee Karonaha oo ah mid aan la dhayalsan karin, maadaama tirada dhimashada iyo bukaannada uu soo ritay cudurkan ay aad u korortay, sidaas awgeed waa in aynu u istaagnaa la shaqeynta laamaha caafimaadka, si buuxdana ugu hoggaansanaa talooyinka iyo awaamirta caafimaad ee lagu ilaalinayo badqabka bulshadeenna.
Waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadkeenna Soomaaliyeed in aynu garab istaagno qoysaska iyo dadkeenna danyarta ah, innaga oo xoojinayna dadaallada afursiinta iyo taakuleynta dhaqaale .
Ugu danbeyntii, Madaxweynaha Dawlada Soomaaliya ayaa ku boorrinayey shacabka Soomaaliyeed ka shaqeynta danta guud oo amnigu uu ugu horreeyo, kuwaas oo dhammaantood tiirar u ah waajibaadka diinteenna suuban ee Islaamka.
Mareykanka Oo Ka hor yimid Muddo Kordhinta Farmaajo Loo sameeyey
DHAGEYSO: Xukuumada Oo Dhiseysa Cusbitaalka Xoogga Dalka